केही आफ्नै कथा, ब्यथा अनि भावनाहरु: छापामार युवातीको डायरी
Posted by मनु ठाडा मगर (MANU) at 5:58 AM
आफुले पढ्न नपाएको पुस्तकको सार राम्रो संग बुझ्न पाइयो ! (धन्यवाद मनु जी !)
तर एउटा सच्चा देशभक्तले मुक्तिको लागि लड्न गरेको अठोट या आफ्नो निर्णय प्रति आफैले गर्नु परेको पछुतो जनाउनु पर्ने अवस्था देख्दा निकै खिन्न लाग्यो ! हुन् त ठुलाले साना लाइ माथि (उच्च पदमा जाने) पुग्ने सिंडीको रुपमा प्रयोग गरेको थाहा पाउदा कसको पो मन भाचिन्न र ? सायद त्यसै भएको हुनु पर्छ - लेखिका लाइ पनि !
सो समय त उहिहरु माथि क्रुर भएर बर्सियो तर अहिले नि देशको र नेता भनाउदाहरुको यो गति देख्दा ति देश भक्तहरुको ... मन र सोच कस्तो भएको होला ??